Iintlanganiso eDurres - ngeehotele
Unikezelo kwi Durres
Sineendawo zemicimbi yakho yonke!
Yonwabela ukwamkelwa ngokufudumeleyo kwiihotele eziyinyani zaseAlbania, iiholide, iiVillas kunye neeaparthotels.
Iindawo zemicimbi e Durres
Ukuba unqwenela ukubamba inkomfa yakho okanye intlanganiso eAlbus Durres, ke wenze ukhetho olufanelekileyo. Imbali ye-Durres epholileyo ithathe iminyaka engama-406, apho isiko kunye nenkcubeko yanamhlanje idibanisa ngendlela emnandi. Isixeko sisondele kwiipaki ezintle ngelixa sinandipha indawo entle yedolophu.
Iindawo zemicimbi eenkomfa kunye namagumbi endibano eDURRES
Ngokwemvelo, sinoluhlu olubanzi lwezixhobo zenkomfa kunye namagumbi endibano eDurres ezenza kube lula ukuba uhlangane nazo. Sinikezela iinkomfa kunye neentlanganiso zabo bonke ubungakanani ukuba uthathela ingqalelo imisebenzi yokwakha iqela, indawo yokuqalisa umdlalo okanye umcimbi wenkampani. Sinceda ukuba ufumane indawo yenkomfa yokwenza inkomfa yakho iphumelele.
Ihotele zethu zenkomfa eDurres
IVH iBelmond Durres
Ihotele kunye nerestyu
Ihotele i-VH Belmondo yeyona ndlela ifanelekileyo yokukhetha ishishini kunye nohambo lokonwaba eAlbania ngenxa yendawo entle eselunxwemeni. Ngendlela yanamhlanje encinci, iWestern Star Hotel inamagumbi angama-30 aphangaleleyo enzelwe ukuthuthuzela iindwendwe zethu. Zonke zinesantya esiphezulu se-Wi-Fi, imeko yomoya nganye kunye negumbi lokuhlambela labucala.
IVH iNkulumbuso yaseVilla Pascucci Durres
I-VH PRIME I-Villa Pascucci lukhetho olufanelekileyo kwishishini lakho kunye nohambo lokonwaba eAlbania ngenxa yendawo yethu entle kufutshane nonxweme. Ngestayile sanamhlanje esincinci, i-PRIME Villa Pascucci inamagumbi amakhulu angama-50 enzelwe ukuthuthuzela iindwendwe zethu. Zonke zinesantya esiphezulu se-Wi-Fi, imeko yomoya nganye kunye negumbi lokuhlambela labucala.
IVH yeNtshona Star Durres
I-VH yeWest Star Ihotele lukhetho olufanelekileyo kwishishini lakho kunye nohambo lokuzonwabisa eAlbania ngenxa yendawo yethu entle kufutshane nolwandle. Ngestayile sangoku esine-minimalist, i-Western Star Hotel inamagumbi angama-30 aphangaleleyo ngokukodwa enzelwe ukuthuthuzela iindwendwe zethu. Zonke zinesantya esiphezulu se-Wi-Fi, imeko yomoya nganye kunye negumbi lokuhlambela labucala.
UTYRANNE • IINXAXHEBA • USaranda